mardi, 24 septembre 2019 23:17
FOFIFA: Mitaraina ny mpiasa fa fito volana tsy nandray karama
Nitokona teny amin’ny foiben’ny FOFIFA (Foibe Fikarohana momba ny Fambolena sy Fiompiana Ampiharina ho Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra) eny Ampandrianomby Antananarivo androany ireo mpiasa, mitaraina fa tsy nandray karama efa fito volana izao.
Miisa 200 eo ireo mpiasa voakasik’izany tsy fandraisan-karama izany. Nilanja sorabaventy izy ireo nanamafisana ny fitakiana sy nanehoan’izy ireo ny hetahetany.
mardi, 24 septembre 2019 23:10
Ministeran’ny Serasera sy Kolontsaina: Nomen’ny CS FOP rariny ireo mpiasa noroahina
Nahazo rariny teo anatrehan'ny CS FOP (Conseil Supérieur de la Fonction Publique) ireo mpiasa noroahina tato amin’ny Ministeran’ny Serasera sy Kolontsaina taorian’ny Tagnamaro voalohany notanterahin’ny ministera teny amin’ny hopitalin’i Mahitsy – Ambohidratrimo tamin’ny sabotsy fahatelo ny volana martsa 2019.
Nivoaka ny fanapahana manery ny ministera hanafoana ny naoty mandroaka ireo mpiasa ireo, ka hamerina azy ireo amin’ny asany. Folo mahery izy ireo.
mardi, 24 septembre 2019 22:53
Ady amin’ny zava-mahadomelina: Mitohy ny famotehana ireo sahan-drongony aty Ambanja-Ambilobe
Efa an-taoniny maro no potika eny an-tsaha, na izany aza mitohy hatrany ny hetsika fiadiana amin'ny Jamala ataon'ny Zandarimaria ato anatin'ny Distrikan'i Ambanja sy Ambilobe ary Antsohihy.
Manao ny ainy tsy ho zavatra ireo Zandary any anaty ala any mamotika ireo sahan-drongony.
mardi, 24 septembre 2019 22:47
ACMIL Antsirabe: Maro ny tovovavy te ho Miaramila
Nanomboka androany 24 septambra 2019 ny fifaninanana fihodinana voalohany hidirana ho mpianatra manamboninahitra, andiany mivantana faha-43 ao amin'ny Akademia Miaramila Antsirabe.
Misy toeram-panadinana avokoa ny renivohim-paritany enina eto Madagasikara. Rezimanta Voalohan’ny Sampandraharaha sy Fifandraisana, na 1°RTS ny toeram-piadinana ho an’Antananarivo. Hita androany fa maro ny tovovavy maniry hiditra ao amin’ny ACMIL Antsirabe.
Miara-misalahy amin'ny fandavorariana izao fifaninana izao ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena (MDN) sy ny Birao mahaleotena miady amin’ny Kolikoly (BIANCO) ary ny Minisiteran’ny Asa sy ny Fampananan’Asa, ny Asam-panjakana ary ny Lalana Sôsialy (MTEFPLS).
mardi, 24 septembre 2019 22:42
Faritra Analamanga sy Tsiroanomandidy: Misy ny vinavina hanorenana tobim-pamokarana herinaratra 5MW
Ny orinasa Afrikanina Tatsimo « Little rock » no hanao ny fanadihadihana handinihana ny fametrahana tobimpamokarana herinaratra manana tanjaka 5 MW aty amin’ny Faritra Analamanga sy Tsiroanomandidy. Haharitra enim-bolana ny fanadihadihana.
Nisy ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny Ministeran’ny Angovo, ny Rano ary ny Akoranafo tamin’ny alalan’ny minisitra Vonjy Andriamanga sy ny Orinasa Afrikanina Tatsimo « Little rock » solon-dRobert Remesha Bengerezako tena ho mariky ny fanombohan’ny asa.
mardi, 24 septembre 2019 22:27
Bakalôrea 2019: Miisa 174 751 ny mpiadina, 88 taona ny zokiny indrindra
Hotanterahina manerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny 30 septambra ka hatramin'ny 04 oktobra 2019 ny fanadinam-panjakana bakalôrea ankapobeny sy bakalôrea teknika fihodinana voalohany. Hitohy ny 07 oktobra ka hatramin'ny 10 oktobra 2019 kosa ny fihodinana faharoa ho an’ny bakalôrea teknika. Efa tomombana avokoa ny fikarakarana rehetra, hoy ny eo anivon’ny Fampianarana ambony, ny Fikarohana ara-tsiansa sy ny Fanavaozana.
Miisa 174 751 ireo mpiadina manerana ny Nosy, izay hitsinjara amin'ireo ivon-toeram-panadinana miisa 299. Miisa 13 200 ireo mpiadina misafidy ny sokajy A1,miisa 111 957 ny A2. Mpiadina miisa 4 290 ho an’ny sokajy C ary 35 606 misafidy ny sokajy D.
Miisa 9 698 ireo mpiadina hiatrika ny bakalôrea teknika.
mardi, 24 septembre 2019 22:20
Manakara: Mitaky karama ny mpampianatry ny IST
Nidina an-dalambe, nilanja sorabaventy ary nanakan-dalana ireo mpampianatry ny IST Manakara androany talata 24 septambra 2019. Tapaka nandritra ny fotoana vitsy ny lalana miditra sy mivoaka ny tanànan’i Manakara. Mitaky karama izy ireo. Nisy ny fifampidinihana hamahana ny olana. 17 tapitrisa Ariary no tadiavina. Nivaha ny barazy, ary niverina tamin’ny laoniny ny fifamoivoizana.
Mimenomenona ny mpanjifa manoloana ny fidangan’ny vidi-menaka fihinana tato ho ato. Nilaza ny orinasa HITA (Huilerie Industrielle de Tamatave), iray amin’ireo mpamokatra menaka fihinana eto Madagasikara, fa efa herintaona no tsy niovana fa 3200 Ariary ny litatry ny menaka vokarin’izy ireo, ary tsy mbola mieritreritra ny hampakatra vidi-menaka fihinana ny orinasa amin’izao fotoana izao.
Niaiky ny Fanjakana fa nisy fiantraikany tamin’ny vidin’entana ilain’ny olona teny an-tsena ny politika nampiharina ho fiarovana ireo entana vokarika ato anatiny, toy ny savony, paty, dibera, menaka fihinana, menaka ho an’ny fiara, izay notataovana hetra 19% ka hatramin’ny 34% ; tatao 21% ho an’ny menaka fihinana. Fanapahan-kevitra nihatra nanomboka tamin’ity volana septambra 2019 ity.
Niverina tamin’ny heviny ny Fanjakana manoloana ny fimenomenoman’ny olona noho ny fiakaram-bidin’ny entana ilainy andavanandro, ka dia nofoanana ireo tataon-ketra ireo.
mardi, 24 septembre 2019 19:37
Morondava: Raharison Désiré Armand indray izao no mitantana ny tanàna
Vita ny famindram-pahefana teo amin’ny Ben’ny tanàna Kaominina ambonivohitr’i Morondava sy ny lefiny. Raharison Désiré Armand indray manomboka androany no mitantana ny Kaominin’i Morondava.
Kandida hifaninana amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna hatao amin’ny 27 novambra 2019, ny Ben’ny tanàna amperinasa Kolo Frijof ka tsy maintsy mametra-pialana araka ny volazan’ny lalàna dia no nirosoana tamin’ity famindram-pahefana natao androany talata 24 septambra 2019 ity.
Tontosa omaly alatsinainy 23 septambra 2019 ny ankitsapaka nandaharana ao anaty biletà tokana ireo kandida Ben’ny tanàna sy mpanolontsain’ny tanàna eto amin’ny Kaominina ambonivohitr’i Toamasina.
Efatra ireo kandida Ben’ny tanàna, telo kosa ireo lisitra hifaninana amin’ny toeran’ny mpanolontsaina. Hafa kely ny vokatry ny ankitsapaka, satria dia nitovy ny laharan’ny kandida Ben’ny tanàna sy ny lisitra mpanolontsaina miaraka aminy voasarika nandritra io ankitsapaka io.
Voasarika hitondra ny laharana voalohany ao amin’ny biletà tokana ho an’ireo kandida Ben'ny tanàna ity i Nantenaina, kandidan’ny IRD. Mbola laharana voalohany ihany koa ny lisitra mpanolontsaina miaradia aminy.